"Korona yemufudzi", bhuku rekupedzisira muDiscworld dzakateedzana | Zvazvino Zvinyorwa
"Korona yemufudzi", bhuku rekupedzisira muDiscworld dzakateedzana
Maive muna 1983 pakaburitswa "Ruvara rwemashiripiti", iro rekutanga basa raizove kutanga kweyechokwadi odyssey kuburikidza nenyika yakasarudzika. nyika yakati sandara iri pamusoro penzou ina dzinotenderera kuseri kweGreat A'Tuin, hofori hofori inofamba ichienda muchadenga ine nzira isingazivikanwe uye kuti vagari vakati wandei vanoedza kuziva.
Nyika ino inozivikanwa se Discworld uye ndeimwe yemafaro makuru sagas yakashambidzwa nekubata kwekuseka. Iyi nhepfenyuro ndosaka munyori Terry Pratchett achinyanyo kuzivikanwa, kunyange hazvo akaburitsawo mabhuku akazvimiririra akasiyana se "Perillán" kana "The Dragons of the Noisy Castle", asi saga yeDiscworld inohwina mukombe nekuda kwekuoma kwayo uye marara mavambo ayo pakati pemapeji aro, pamwe nemavara ayo anoshamisa imwe neimwe isinganzwisisike.
Asi maive munaKurume wegore rapfuura ndipo patakatambura kurasikirwa kukuru kwemunyori uye gore rino, Musi waMarch 10, iro razvino bhuku rinosvika kuSpain kubva kune muparidzi Fantascy uyo akauya kuzonyora nezve saga iri. Iri ibhuku makumi mana nerimwe rekutanga naDiscworld, kana anopfuura kana mashoma pane nhamba makumi mana nenomwe, nekuti Discworld yaive nyika chaiye umo mubhuku rega rega vanhu vakasiyana vaigara ipapo vakabatwa, kusanganisira Rufu, varoyi, varoyi, vanamwari, mubiki. .. Mavara asingagumi anotiunzira nyaya kune yega yega inonakidza uye inonakidza. Nyika yakaoma kunzwisisa iyo isingafadzi faniro inogona kupotsa.
Kudzokera kune zvakandiunza pano, ini ndinotanga kudzungaira uye ndinorasika munyika iri Discworld, "Iyo Mufudzi Korona" ndiyo yazvino Discworld novel uye nyeredzi inozivikanwa-inozivikanwa muroyi Tiffany Dolorido, ino iri iri rovhero yakabviswa kubva kune Inorwadza Tiffany subseries. Nekuti hongu, mukati meiyi huru nhevedzano kune akasiyana masevhisi akarongedzwa zvinoenderana nevanyori vandakambotaura.
Zvinyorwa zve "Korona Yemufudzi"
Iri harisi bhuku rakakura reDiscworld, ibhuku rinoshamisa. "Kutumirwa kwakakwana kuPratchett uye nemutambo wakakura kwazvo."
Chimwe chinhu chiri kumuka zvakadzika mukati mekona. Mazizi nemakava vanozviona uye Tiffany Anorwadza anozviona mumabhuti ake. Muvengi wekare ari kuunganidza mauto.
Inguva yekuguma uye kutanga, kweshamwari dzekare uye nyowani, kutyora miganho uye simba shandura maoko. Zvino, Tiffany iri pakati pechiedza nemumvuri, pakati pezvakanaka nezvakaipa.
Sezvo nguruve iri kugadzirira kupinda, Tiffany anofanira kushevedza varoyi vese kuti vabatane naye. Kuchengetedza pasi. Nyika yake.
Ndiyo nguva yechokwadi.
Mifungo yevamwe vanyori
Terry Pratchett ari zvaaive, hapana kushomeka kwemashoko kubva kuvanyori vakadai saGeorge RR, Patrick Rothfuss kana Neil Gaiman vanobvuma kushamisika kuti munyori uyu anokwanisa kugadzira.
"Terry anga ari mumwe wevanyori vakanakisa vekufungidzira, uye pasina mubvunzo anonakidza."
George RR Martin, munyori wenyaya dzinoteedzana A Rwiyo rweChando neMoto
"Terry Pratchett akaunza mufaro mukuru muhupenyu hwangu kupfuura chero mumwe munyori."
Patrick Rothfuss, munyori weZita reMhepo
"Acharasikirwa zvakanyanya, asi iyo nhaka yeupenzi uye mufaro anotisiyira isu!"
"Munyori wetarenda rakakura."
«Akanga akasiyana. Ndakaita rombo rakanaka rekunyora bhuku naye, tichiri vadiki, uye ndakadzidza zvakawanda. Ndichakusuwa, Terry.
Nakidzwa nehungwaru bhuku iri, rinova rekupedzisira paDiscworld kunyangwe, kana usati wazvitanga, iwe une mukana wekuve nemabhuku makumi mana nemana akanaka kubva pasi rino. Ini zvechokwadi ndichapotsa munyori nekuti ini ndinoda Discworld uye kugona kwake kugadzira ino yekufungidzira nyika kunoshamisa. Zvakare nekubata kwekuseka kwaanotakura naye uye kunoita kuti mabhuku ake ave musanganiswa wekuda kuziva uye kuseka.
Wakaverenga chero ripi zvaro remabhuku nemunyori uyu? Ndeupi waunofarira Discworld hunhu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Fantasy » "Korona yemufudzi", bhuku rekupedzisira muDiscworld dzakateedzana
Wepamusoro gumi Anodiwa Stephen King Mabhuku
Mabhuku makumi maviri anotengesa zvakanyanya ezana ramakumi maviri nemasere